Yan Aung: September 2007
၁. နအဖဟာ အင်တာနက်၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းစတဲ့ သတင်းစီးဆင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ source တွေကို ရအောင်လိုက်ပိတ်ဦးမယ်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တရုတ်၊ ရုရှတို့ရဲ့ ထောက်ခံမှုကို စဉ်ဆက်မပြတ်ရနေအောင် ကြိုးစားနေလိမ့်မယ်. KNU, ABSDF, နဲ့ တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေ မ၀င်လာနိုင်အောင်လည်း တစ်ပြိုင်တည်းမှာ ပြင်ဆင်နေလိမ့်မယ်. ဒါ့အပြင် တပ်တွင်း ပြိုကွဲမှု မဖြစ်အောင် တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေးတွေလည်း ထားရှိလ်ိမ့်မယ်. ဒါက နအဖရဲ့ Plan A ပါ.
၂. ဆန္ဒပြသပိတ်မှောက်တဲ့ ပြည်သူတွေကို မထွက်ရဲအောင် လမ်းဆုံလမ်းခွတိုင်းမှာ စစ်ကားတွေ၊ အရပ်ဝတ်ရဲတွေ ထားရှိလိမ့်မယ်. ကုလကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဂမ်ဘာရီ ရောက်ရှိနေစဉ်အတောအတွင်းမှာ နအဖကို ထောက်ခံတဲ့ ပြည်သူ့ဆန္ဒပြပွဲ အတုအယောင်တွေကို အင်အားသုံးပြီး ဖန်တီးလိမ့်မယ်. အစစ်အမှန်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ ရောထွေးခြင်း မရှိအောင် အမှတ်အသားတွေ လုပ်ထားလိမ့်မယ်. ပြည်သူချင်း ရန်တိုက်ပေးလိမ့်မယ်.
၃. ရဟန်းသံဃာတော်တွေရဲ့ အဓိကအင်အားက စာသင်တိုက်တွေပါ. ဒါကြောင့် သံဃာတော်တွေကို နေရပ်ကို အတင်းအကြပ်ပြန်ခိုင်းခြင်း၊ သံဃာ့နာယက ဆရာတော်များကို အပြောင်းအလဲလုပ်ခြင်း၊ ညဖက်တွေမှာ အငိုက်ဖမ်းပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို ၀င်စီးခြင်းတွေ လုပ်ပါလိမ့်မယ်.
၄. စစ်တပ်အကြီးအကဲပိုင်းတွေမှာ ရာထူးအပြောင်းအလဲတွေ ရှိလ်ိမ့်မယ်. တပ်မတော်ပြိုကွဲမှာတော့ မဟုတ်သေးဘူး. ဒါပေမယ့် တပ်ထဲက ခပ်ကြီးကြီး အရာရှိတစ်ချို့ ဖြုတ်ထုတ်ရှင်းခံရလိမ့်မယ်. သစ္စာစောင့်သိနိုင်ခြေရှိမယ့် စစ်တပ်အရာရှိတွေကို ပြောင်းလဲ အစားထိုး ခန့်ထားလိမ့်မယ်.
၆. အမျိုးသားညီလာခံက ထောက်ခံပွဲတွေကို လောလောဆယ် သူတို့လုပ်ဝံ့မှာ မဟုတ်သေးဘူး. ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူထုက အရမ်းကို ပေါက်ကွဲဒေါသထွက်နေပြီ ဆိုတာကို သူတို့သိတယ်. ဒါကြောင့် ကြံ့ဖွံ့အင်အားများများသုံးပြီး လူထုအနည်းငယ်ရောကာ ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲတွေကို အရပ်ဝတ်စုံထောက်တွေ၊ ရဲတွေ အများကြီးထည့်ပြီး လုပ်လိမ့်မယ်. မလိုက်ရင်ခြိမ်းခြောက်ပြီး အတင်းအကြပ်လိုက်ခိုင်းလိမ့်မယ်.
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုဖက်က ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုမလဲ. Strategy တွေကို ဆွေးနွေးပေးပါ. ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ နောက်လုပ်မယ့် အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြဆွေးနွေးသွားပါမယ်.
Japan to demand full explanation of death of journalist in Myanmar
TOKYO (AP): Japan will press Myanmar forafull explanation of the death ofaJapanese journalist duringaviolent crackdown on anti-government protests, officials said Friday.
Kenji Nagai was among nine people killed Thursday when soldiers fired automatic weapons intoacrowd of pro-democracy demonstrators. Nagai, 50,avideo-journalist, was working for Japanese news agency APF News.
Officials have said Nagai was believed to have been shot in the chest. There were conflicting reports that he was struck by stray bullets fired by Myanmar soldiers or shot from the front.
"We offer our prayers and condolences for him," Chief Cabinet Secretary Nobutaka Machimura said. "I think what's most important at the moment is to demandafull accounting of what happened."
Prime Minister Yasuo Fukuda said Nagai's death was "extremely unfortunate."
Deputy Foreign Minister Mitoji Yabunaka was scheduled to visit Myanmar this weekend to express Japan's anger to the ruling military junta, according to officials.
"I don't want Myanmar authorities and the government to resort to such measures," Nagai's father, Hideo, told reporters. "I want them to prevent something like this from happening again." (**)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ မြန်မာနှင့် အခြားဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော်အပါး ၃၀ ခန့် ဦးဆောင်၍ ကုလသမဂ္ဂ ရုံးချုပ်ရှေ့တွင် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့၌ ဆန္ဒပြပွဲ တစ်ရပ် ကျင်းပခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဖိနှိပ်သတ်ဖြတ်နေမှုများကို ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချသည့်အနေဖြင့် ဆန္ဒပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆန္ဒပြနေစဉ် နယူးယောက် အခြေစိုက် သတင်းဌာနများနှင့် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ သတင်းဌာနများက သတင်းများစွာ ယူခဲ့သည်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဖြစ်ပျက်နေသော အခြေအနေများကိုလည်း ဆန္ဒပြနေသော သံဃာတော်များအား မေးမြန်းစုံစမ်းကြသည်။
တက်ရောက်လာသော မြန်မာများကလည်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပုံတော်၊ နိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပျက်နေသော ဓာတ်ပုံများနှင့် “China, Russia, UN! Take Action on Burma!!!” စသော အလံများကိုင်ဆောင်၍ အပြင်းအထန် ဆန္ဒပြကြသည်။
ဆက်လက်၍လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်း သံဃာတော်များနှင့် အခြားကျောင်းသားပြည်သူများ ခံစားနေရသော ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန္ဒများ ထုတ်ဖော်ပြသသွားမည် ဖြစ်သည်။
P.O. Box 770401, Woodside, NY 11377-0401
ဓာတ်ပုံများကို DNY မှ ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ပါသည်...
Media Campaign အတွက် ဒီလိုစီစဉ်ထားပါတယ်.
1. Blogspot ကို ပြည်တွင်းကလူတွေ ဖတ်လို့ရအောင် စီစဉ်မယ်. (Blogger Network ကို ပီပီပြင်ပြင်တည်ဆောက်မယ်. Proxy Server တွေကို အားလုံးသိအောင် ကြေငြာလိုက်ရင် နအဖက ဘန်းပစ်လိမ့်မယ်. ဒါကြောင့် Blogger Network ထဲမှာပဲ လက်သိပ်ထိုးပြောမယ်. နီးစပ်ရာကို ဆက်လက်ဖြန့်ဝေပေးသွားဖို့ပါပဲ.)
2. Wordpress Platform ကို သုံးပြီး ဘလော့ဂ်တွေကို ဆက်ရေးသွားမယ် (ဒီ့အတွက် ကျွန်တော် အချိန်အနည်းငယ်ယူပြီး ကြိုးစားသွားပါမယ်)
3. Youtube Website မှာ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက သွေးထွက်သံယိုမှုတွေအကြောင်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက သိလာအောင် တင်ဆက်သွားမယ်
4. သတင်းဓာတ်ပုံတွေကို ရသလောက်ယူပြီး New York Times, Asahi Shinbon, Washington Post စတဲ့ အင်အားကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံခြားသတင်းစာတွေဆီကို ပို့ပြီး သတင်းအနေနဲ့ ပါဝင်နိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်. (လောလောဆယ် ဂျပန်သတင်းထောက် အသတ်ခံလိုက်ရတာက ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ သတင်းစာတွေနဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေကို စည်းရုံးဖို့အတွက် အခွင့်အခါကောင်းတစ်ခုပဲ. ဒါကို ဂျပန်စကားတတ်ကျွမ်းတဲ့ ဘလော့ဂါများ (၀ါ) ခေတ်ပညာတတ်လူငယ်များက ကူညီရေးသားပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်)
ပြည်တွင်းက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေအတွက် Funding ကိစ္စကိုလည်း ပိရိသေသပ်စွာ အကောင်အထည်ဖော်သွားရုံသာမက နိုင်ငံတကာရဲ့ အကူအညီကိုလည်း ရယူနိုင်အောင် ဘလော့ဂ်တွေထဲက ပို့စ်ကောင်းကောင်းတစ်ချို့ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ စုစည်းတင်ပြထားမယ်. ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါတွေ တော်တော်များများက မြန်မာလိုပဲ ရေးနေကြပါတယ်. နိုင်ငံတကာရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ရယူနိုင်ဖို့ အင်္ဂလိပ်လိုတင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်. ဒီ့အတွက် ဘာသာစကားနှစ်မျိုးလုံး နိုင်နင်းတဲ့ ဘလော့ဂါကောင်းများ၊ စာရေးဆရာများ အလိုရှိပါတယ်.
ဒါကျွန်တော်ခုချက်ချင်း စဉ်းစားလို့ရသမျှပါ. အသေးစ်ိတ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆက်ပြောသွားပါမယ်.
ကျွန်တော်တို့ နယူးယောက်မှာ အရင်တစ်ပတ်က ဆန္ဒပြပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်. အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာတွေ လာရောက်ပူးပေါင်း ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်. ဓာတ်ပုံတွေကို တင်ပြီးပါပြီ. အခုဆက်ပြောလိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ပက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ ပြည်တွင်းကဆန္ဒပြသူတွေအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပါပဲ.
ပြောစရာတွေ အများကြီးပဲဗျာ. ဘာကို စပြောရမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ သေချာစီစဉ်နေရတယ်. ပြောချင်တာတွေ သိပ်များပြီး ဘာကိုမှ ပြောမထွက်တော့တာတွေ ခဏခဏ ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်. နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ် အပြောချင်ဆုံးအရာကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်ပြီး ကျန်တာတွေကို supporting factors တွေ အနေနဲ့ ဖြည့်ပြီး ပြောသွားတာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်. ဒါကြောင့်လည်း ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်ပါတယ်.
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြုတ်ချဖို့ အချိန်ဟာ အခုအချိန်ပါပဲ. ဒီလိုမျိုး လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီး တစ်ခဲနက်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး. ဒီအချိန်ကိုမှ အသုံးမချနိုင်ရင်၊ မှန်ကန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ တင်ကြိုပြင်ဆင်မှုတွေ မရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကြီး အရေးနိမ့်သွားနိုင်ပါတယ်. သူတို့က လက်နက်နဲ့ပါ. ကျွန်တော်တို့တွေက လက်နက်မဲ့ပါ.
လက်နက်ကိုကိုင်စွဲထားတဲ့သူက လက်နက်ကိုပဲအားကိုးတယ်. လက်နက်ကလွဲလို့သူမသိဘူး. ဒါက သူ့အတွက် အားသာချက်ဖြစ်သလို အားနည်းချက်လည်း ဖြစ်တယ်. အားသာချက်က ဘာလဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ လူအင်အားနည်းပေမယ့် ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုမဆို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲနိုင်တယ်. အားနည်းချက်ကတော့ လက်နက်ကို ယုံကြည်အားထားနေရတဲ့အတွက် စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့တယ်. လက်နက်နဲ့ဖြိုခွင်းမရနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်အင်အားကို မကျော်လွှားနိုင်ဘူး…
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေက လက်နက်မဲ့ဖြစ်တယ်. ဒါကြောင့် အလွယ်တကူနှိမ်နင်းခံရတယ်. အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်. သို့သော် လက်နက်မရှိပါလျက်နဲ့ မိမိတို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို ရဲဝံ့စွာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာဟာ နည်းနည်းနောနော သတ္တိမဟုတ်ဘူး. စိတ်ဓာတ်အင်အားသိပ်ကို ပြင်းထန်တယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားတယ်..
ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားသာချက်ဖြစ်တယ်.
ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလို်က်တော့ ခင်ဗျားတို့က ထင်လိမ့်မယ်.
ဟ. မင်းပြောမှလားကွ… ပေါ့
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို လက်နက်နဲ့ တည်ဆောက် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး. စိတ်ဓာတ်နဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တာ…
အခုလည်း ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲ ဒီသပိတ်ကို နိုင်အောင် တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်
နအဖဟာ ဘာကို အကြောက်ဆုံးလဲ..
သူတို့အာဏာ ဆုံးရှုံးမှာကို ကြောက်တယ်. ပြည်သူလူထုကြီးတစ်ရပ်လုံး ဆန္ဒပြသပိတ်မှောက်တဲ့အထဲမှာ ပါဝင်လာမှာကို ကြောက်တယ်. စစ်သားတွေ အာဏာဖီဆန်မှာကို ကြောက်တယ်.
နအဖရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာလဲ.
သူတို့မှာ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘဲ ထင်ရာစိုင်းတဲ့ ညဉ်ရှိတယ်. သူတုိ့ကို ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတာက တရုတ်နဲ့ ရုရှ. အဲဒီ့နှစ်နိုင်ငံလုံးက UN Security Council မှာ Veto အာဏာသုံးပိုင်ခွင့်ရှိနေတယ်. မြန်မာပြည်အရေးကို Security Council မှာ တင်ပြတိုင်း ဒီနှစ်နိုင်ငံက ပယ်ချခဲ့တာချည်းပဲ. အခုလည်း အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလန်စတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုတွေ၊ လူမဆန်မှုတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို တင်ပြဆွေးနွေးပေမယ့် တရုတ်နဲ့ ရုရှက မသိကျိုးကျွံပြုနေပါတယ်. This is not an international threat! ဆိုပြီး ဘူးခံငြင်းနေပါတယ်.
ဒီတော့ နအဖက လုပ်ချင်ရာဆက်လုပ်နေနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနေတယ်.
နအဖရဲ့ အားနည်းချက်က ဘာလဲ.
ပြည်သူလူထုကို သူတို့ ဆက်မညာနိုင်တော့ဘူး. ရဟန်းသံဃာတော်တွေ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတာကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတာ၊ သတ်ဖြတ်တာ၊ ရိုက်နှက်တာတွေက နအဖရဲ့ အာဏာရှင်စစ်ဘီလူးမျက်နှာဖုံးကို အတိအလင်း ဖော်ပြလိုက်ပြီ. ပိုဆိုးသွားစေတာက ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ဘုရားသားတော်တွေဖြစ်တဲ့ ရဟန်းသံဃာများကို စော်ကားရက်စက်မှုပဲ. သိပ်ကို အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်သွားပြီ.
ကုန်ကုန်ပြောရရင် စစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ကကို နအဖဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ အမိန့်ကို စောဒကတက်လာပြီ. မန္တလေးမှာ ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ တပ်မ ၃၃ ကိစ္စက အထင်အရှားပဲလေ. စစ်သားတွေက ပစ်မိန့်ကို ငြင်းဆန်ပြီး ဘုန်းကြီးတွေကို ထိုင်ကန်တော့တယ်.
ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီသပိတ်ဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို တော်တော်ထိုးဖောက်ဝင်သွားပြီ.
မကြာခင်က တောင်ဥက္ကလာပ ငွေကြာယံဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ၀င်ဖမ်းပြီး ရက်စက်စွာ ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စဟာလည်း ပြည်သူလူထုကို အမျက်ထွက်စေခဲ့တယ်.
သေချာတယ်. ဒီသပိတ်ဟာ Climax ကိုရောက်သွားပြီ.
နအဖ သတ်ချင်သလောက်သတ်. ပစ်ချင်သလောက်ပစ်.
ပြည်သူတွေ ဆက်ပြီး ဆန္ဒပြနေမှာပဲ. သံဃာတော်တွေ ဆက်လက်ပြီး ကံဆောင်မြဲကံဆောင်နေမှာပဲ.
ဒါက နအဖရဲ့ အားနည်းချက်ပဲ…
သူတို့ရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု သတင်းတွေ ပြည်ပမီဒီယာတွေကို ပျံ့နှံ့သွားမှာကိုပဲ. ဒါကြောင့်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဘလော့ဂါတွေ အဖမ်းခံရတယ်. ဆာကူယာနဲ့ ထရိတ်ဒါးဟိုတယ်ကိုလည်း ၀င်စီးခံရတယ်. (ဓာတ်ပုံတစ်ချို့က အဲဒီ့ဟိုတယ်တွေပေါ်က ရိုက်ထားတာကိုး) မကြာခင်က APF Tsushin Media Company က ဂျပန်သတင်းထောက် Kenji Nagai ဆန္ဒပြပွဲကို ဓာတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းတင်နေရင်း သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတယ်.
ဒါတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နအဖဟာ Media Flow ကို အရမ်းကြောက်တယ်. ဒါကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်. သူတို့တစ်ချက်လျှော့တွက်သွားခဲ့မိတာက ဘလော့ဂါတွေကိုပဲ. ဘလော့ဂ်တွေကြောင့် ဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေဟာ ပြည်ပမီဒီယာသတင်းဌာနတွေကို တမုဟုတ်ချင်း ပျံ့နှံ့သွားခဲ့တယ်.
ဒါကို နအဖက သိလည်းသိရော Blogspot ကို ဘန်းတယ်. Attached File လုပ်တာတွေ အဆင်မပြေအောင် Internet Speed ကို နှေးပစ်တယ်. Cyber Café တွေကို သေချာစောင့်ကြည့်ခိုင်းတယ်. ဘလော့ဂါတစ်ချို့ကို ခြိမ်းခြောက်တယ်၊ တစ်ချို့ကို ဖမ်းဆီးတယ်.
ကဲ. ကျွန်တော်ခုပြောခဲ့တာတွေကို Conclusion ပြန်ဆွဲမယ်ဗျာ..
ပြည်တွင်းက ဘလော့ဂါတွေ အနေနဲ့ ငါတို့ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့. ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်အတွက်အများကြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်. ဘာမှမလိုဘူး. သတင်းပေးပါ၊ ဓာတ်ပုံတွေကို တစ်နည်းတစ်ဖုံနဲ့ရအောင် ပြည်ပကိုပို့ပေးပါ. ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေကို သတင်းအနေနဲ့ ရေးပို့ပေးပါမယ်. ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်း Credit ပေးပါမယ်. ဒီလိုမျိုး ဓာတ်ပုံရိုက်သူတွေကိုယ်တိုင်က ခွင့်ပြုချက်ပေးမှသာ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေက ဒီသတင်းဓာတ်ပုံတွေကို ယူသုံးနိုင်ပါတယ်. ဒါကို အလေးအနက်ထားပြီး စဉ်းစားပေးကြပါ.
အခုနယူးယောက်တိုင်းမ်စ်သတင်းစာ ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံသတင်း ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပါနေတာ ၃ ရက်ရှိပြီ. BBC World News၊ CNN စတဲ့ သတင်းဌာနတွေမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံသတင်းက Headline News ဖြစ်နေတာပဲ. နအဖရဲ့ စစ်ဘီလူးရုပ်ကို နိုင်ငံတကာက သိလာပြီး အခုကျင်းပနေတဲ့ UN Assembly မှာ Agenda အနေနဲ့ ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့တွေ ကြိုးစားရမယ်.
ဆန္ဒပြသူတွေက ဆက်ပြနေသလို ခေတ်ပညာတတ်လူငယ်များကလည်း မိမိတို့ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ပညာစွမ်းနဲ့ ဒီသပိတ်တိုက်ပွဲကြီးကို ဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်.
ဥပမာ. ဘန်းထားတဲ့ Website တွေ၊ Blog တွေကို ရအောင်ဖတ်နည်းတွေကို ဝေမျှပေးဖို့လိုပါတယ်. သတင်းဓာတ်ပုံတွေကို နအဖရဲ့ စောင့်ကြည့်မှုကို ရှောင်ကွင်းပြီး ပို့ပေးနိုင်အောင် By Pass Server နည်းမျိုးတွေ သုံးဖို့ လိုပါတယ်. ဒါတွေက အကြမ်းဖျင်းပြောတာပါ.
အဓိကအချက်က ပြည်တွင်းကလူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေနိုင်အောင် လှုံ့ဆော်အားပေးနေနိုင်ဖို့ပဲ.
ဒါကြောင့် Media Campaign ကို ကျွန်တော်အတိအလင်း ကြေငြာလိုက်ပါပြီ.
နောက်ဆုံးအင်တာနက်လုံးဝသုံးမရတော့ရင် ဂြိုဟ်တုဖုန်းတွေကို သုံးပြီး Media Campaign ကို ဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားပါမယ်.
ဒီတော့ ပြည်တွင်းက ဘလော့ဂါများနဲ့ နိုင်ငံရေးအသိစိတ်ဓာတ်နိုးကြားတက်ကြွတဲ့ လူငယ်လူရွယ်လူကြီးများက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Media Campaign ကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးကြပါလို့ ဒီပို့စ်လေးရေးပြီး မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်.
ငါ့တိုင်းပြည်၊ ငါ့လူမျိုး၊ ငါ့နိုင်ငံတော် အတွက် ငါ၏ အသက်ကို စွန့်လွှတ်ရန် သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ပြုသည်...
ကျွန်တော် ပျောက်နေခဲ့တာ ကြာပါပြီ. ဒီကိစ္စအတွက် ကျွန်တော်အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်. ပြန့်ကြဲနေတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို ကြိုးစားထိန်းချုပ်နေခဲ့ရင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ တန်ဖိုးတွေကို ရှာဖွေနေခဲ့လို့ပါ
ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တင်းကြပ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရတာက တစ်ချို့သော လူမှုရေးကိစ္စလေးတွေကြောင့်ပါ. အခုတော့ ကျွန်တော် ကြိုးစားဖြေရှင်းလိုက်နိုင်ပါပြီ. ဘယ်လိုကိစ္စကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စာပြန်ရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ.
လောလောဆယ် မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို အားလုံး အသိပဲ ဖြစ်မှာပါ. ဒါတွေကို ထပ်မံပြီး မပြောပြလိုပါဘူး. အမှန်တော့ ပြန်မပြောပြနိုင်အောင်ကို ရင်နင့်ကြေကွဲခံစားရလို့ပါ.
ကျွန်တော့်တိုင်းပြည်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ ပညာနဲ့ စိတ်ဓာတ်အင်အားကို အစွမ်းကုန် အသုံးချသွားဖို့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆုံးဖြတ်လိုက်နိုင်ပါပြီ.
အချိန်အတော်ကြာ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့်ကို အားလုံးပဲ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
သတင်းကို ရေးနေတုန်းပါ. ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ဆက်တင်ပေးပါဦးမည်...
ဖမ်းဆီးခံ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်တွင်း နှိပ်စက်ခံရ၍ ဆေးရုံတင်ရခြင်း...
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အင်းစိန်ထောင်က လွတ်လာတဲ့ ရာဇ၀တ်မှု အကျဉ်းသားတစ်ဦးရဲ့ ပြောပြချက်အရ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင် ဆေးရုံမှာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်၊ ကိုမြအေး၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုမာကီး (ခ) ကျော်ကျော်ထွေးတို့ (၄) ဦး ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူတို့ကို စစ်ကြောရေးမှာ ပြင်းထန်တဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေနဲ့ အာဏာပိုင်တွေက စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Source: ကိုထိုက်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကနေ ရယူပါတယ်.
နယူးယောက်မြိှု့ကုလရုံးရှေ့မှာ အကြီးကျယ်ဆုံး ဆန္ဒပြပွဲကြီးတစ်ခု ပြုလုပ်မည်..
စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်၊ သောကြာနေ့၌ မြန်မာနိုင်ငံ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူပြည်သားများကို ကယ်ဆယ်ရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂက ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးရေး ဆန္ဒပြအခမ်းအနားတစ်ရပ် စီစဉ်ထားပါတယ်…
အဲဒီ့အခမ်းအနားကို Indiana, North Carolina, Maryland, Ohio, Pennsylvania, Upstate New York နှင့် အခြားသော ပြည်နယ်များရှိ မျိုးချစ်မြန်မာများ ပူးပေါင်းပြီးတော့ စီစဉ်ထားတာပါ.
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲများကို ကုလသမဂ္ဂမှ ပါဝင်ဖြန်ဖြေဆောင်ရွက်ပေးရေးအတွက် ဆက်လက်လှုံ့ဆော် တွန်းအားပေးသွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.
ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်ရှေ့မှာ ဆန္ဒမပြမီ ကျွန်တော်တို့ ဆန္ဒပြသူများဟာ ရုရှသံရုံးနဲ့ တရုတ်သံရုံးတို့ရှေ့ကို ပထမဦးစွာ ချီတက်ဆန္ဒပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
ဆန္ဒပြပွဲကို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ လာရောက်ပူးပေါင်းပါဝင်အားဖြည့်ပေးမယ့် ဒီမိုကရေစီ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ၊ မျိုးချစ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေ၊ နိုင်ငံချစ်တဲ့ အဝေးရောက်သားကောင်းမြန်မာတွေကို ဧည့်ခံကျွေးမွေးဖို့ အစားအစာနဲ့ ရေတို့ကိုလည်း လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ…
ဒီသတင်းကို နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့ထံ ဆက်လက်ဖြန့်ဝေပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်..
ဆန္ဒပြမည့်အချိန်… နေ့လည် ၁၂ နာရီ
(၁) ဆုံရပ် - Russian Mission to UN, 136 East 67th Street, New York, NY 10021
(၂) ချီတက်မည့်နေရာ - China Mission to UN, 350 East 35th Street, New York, NY 10016
(၃) အခမ်းအနားနေရာ - United Nations, Dag Hammarskjold Plaza, 47th Street and 1st Ave, New York, NY 10017
- ၀င်းရှိန်မောင် - 718-335-5913
- မိုးချမ်း - 646-643-8689
* ဒီဖြန့်ဝေစာမူရင်းပါ စာသားတစ်ချို့ကို ဖတ်ရှုရတာ အဆင်ပြေလွယ်ကူအောင် အနည်းငယ်ပြောင်းလဲ ဖြည့်စွက်ရေးသားထားပါတယ်. ဒီဆန္ဒပြပွဲကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း သွားရောက်အားဖြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်. သတင်းဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ.
စစ်တွေသံဃာတော်များ ဆန္ဒပြပွဲ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခံရ...
သံဃာတော်များ လူစုခွဲလိုက်ကြပြီ ဖြစ်ရာ ယနေ့ ဆန္ဒပြပွဲ အေးချမ်းစွာဖြင့် ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။ မြို့သူမြို့သား အများအပြား သံဃာတော်များ၏ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ချက် အပေါ် ဝမ်းသာအားရ အားပေးကြပြီး စစ်အစိုးရက မလိုက်လျောမချင်း ဆန္ဒပြမှုများ ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ဆရာတော် တပါးက မဇ္ဈိမ သို့ ပြောကြားသွားသည်။
ပုဇွန်တောင်ရှိ ကျောင်းတိုက်များ အတွင်း သံဃာတော်အများ ဝင်ရောက် သွားပြီးနောက် ကျန်ရှိသူ သံဃာတော် ၁ဝဝ ကျော်က ဗိုလ်တထောင် လမ်းမှသည် စိန်ပေါ်လ်လမ်းဘက် ကွေ့ဝင်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
လိုက်လံ အားပေးသူ လူ ၂ဝဝဝ ကျော်ခန့် ရှိသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့နယ်ရှိ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည် လမ်းကို အာဏာပိုင်များက ပိတ်ဆို့လိုက်သည်။
ရန်ကုန်မြို့လမ်း ၅ဝ သို့ ဆန္ဒပြ သံဃာတော်များနှင့် အားပေးသူ လူအုပ်စုကြီး ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်သည်။
ဆူးလေဘုရားတွင် သံဃာတော်များ ရာနှင့်ချီ၍ ပိတ်မိနေသည်ဟု သိရသည်။
အင်အား ၉ဝဝ ခန့်ရှိ ဆန္ဒပြ သံဃာတော်များ သိမ်ဖြူဘက်သို့ ချီတက်သွားကြရာ ပြည်သူလူထုကလည်း လိုက်ပါလာလျှက် ရှိသည်။ စုစုပေါင်း လူအုပ်ကြီးမှာ ၁၅ဝဝ ခန့် ရှိသည်။
လူထုကြီးက ရေသန့်ဗူးများ လှူဒါန်းကာ လက်ခုတ်တီး အားပေးကာ လိုက်လာကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆူးလေးဘုရားကြီးပေါ်သို့ ဆန္ဒပြသူများ ချီတက်သွားရာ အလမ်းပြဘုရား လမ်းတလျှောက် ပိတ်ဆို့မှုများ လုပ်ရန် စစ်တပ်က ပြင်ဆင်နေသည်။
ဆန္ဒပြ သံဃာတော်များ ရွှေတိဂုံဘုရားနား အရောက် မုဉ်လေးဖက်စလုံး၏ တံခါးများ ပိတ်ထားသဖြင့် သံဃာတော်များသည် ဆူးလေဘုရား ဘက်ကို ချီတက် သွားကြသည်။
ဆန္ဒပြပွဲ စစဉ်က အပါး ၁ဝဝ ကျော်သာ ရှိသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်း အပါး ၄ဝဝ ခန့်အထိ တိုးလာသည်ဟု မျက်မြင် သက်သေများအရ သိရသည်။
ရွှေတိဂုံ ဘုရားပေါ်နှင့် အနီးတဝိုက် ဆန္ဒပြပွဲသို့ လိုက်လံ ကြည့်ရှုသူ များပြားလှပြီး ထောင်ချီ ရှိကြောင်း ဟု မျက်မြင်သက်သေ တဦးက မဇ္ဈိမ သို့ တယ်လီဖုန်းမှ ပြောသည်။
နေ့လည် ၁၂ နာရီတွင် သိမ်ဖြူလမ်းမှသည် ကန်တော်ကြီး ပတ်လမ်းအတိုင်း ချီတက်ခဲ့ကြပြီး ဘုရားအရှေ့ဘက် မုဉ်ဘက်သို့ ဆန္ဒပြ သံဃာတော်များ ချဉ်းကပ်ခဲ့ကြသည်။
စိုးရိမ်နေသော အာဏာပိုင်များကလည်း ရွှေတိဂုံဘုရား ပတ်ပတ်လည်တွင် စစ်ကား ၅ စီးခန့် ချထားပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးများ၊ စွမ်းအားရှင်များပါ ရောနှောပြီး ဘုရားမုဉ်ဦး တံခါး အကုန်လုံး ပိတ်လိုက်သည်။
ထို့နောက် လူစုကွဲပြီး ဆူးလေဘုရားရှိရာ မြို့ထဲဘက်သို့ သံဃာအပါး ၃ဝ ခန့် ချီတက်သွားသည်ကို တွေ့မြင်ကြရသည်။
“ဘုရားတံခါး ပိတ်လိုက်လို့ ပြေးလွှားတာ ဖိနပ်တောင် ကျန်ခဲ့တယ်။” ဟု အမောတကော ပြေးလွှားလာသူ တဦးက မဇ္ဈိမ သို့ ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် သံဃာတော် အပါး ၁ဝဝ ကျော်က ကန်တော်ကြီးကို ပတ်၍ ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုဉ်သို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက် ဆန္ဒပြနေ ကြသည်။
သတင်းတွေကို ဒီနေရာကနေ ရယူပါတယ်....
ဓာတ်ပုံများကို ပေးပို့ပေးတဲ့ မိတ်ဆွေများကို ကျေးဇူးလှိုက်လှဲစွာ တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ...